I-crankshaft yemoto eqinile neqinile ye-Isuzu4JJ1
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Isuzu4JJ1
Okwe-crankshaft machining rough, i-CNC lathes, imishini yokugaya yangaphakathi ye-CNC, i-CNC lathes, neminye imishini esezingeni eliphakeme izosetshenziselwa kabanzi ukuguqulwa kwe-CNC, ukugaya kwangaphakathi, nokuguqula-braching kwephephabhuku eliyinhloko kanye nejenali yokuxhuma induku ukunciphisa ngempumelelo ukusikeka kwe-crankshaft umshini. Ekuqedeni kwe-crankshaft, ama-crindhaft grinders alawulwa yi-CNC azosetshenziswa kabanzi ekuqedeni omagazini. Lolu hlobo lomshini wokugaya luzohlonyiswa ngezidingo ezizenzakalelayo zedivayisi yokugaya yamasondo ashukumisayo, isikhungo sedivayisi yokulandelela othomathikhi, ukukala okuzenzakalelayo, idivaysi yokunxephezela okuzenzakalelayo, ukugqoka okuzenzakalelayo kwamasondo, isivinini somugqa oqhubekayo nezinye izidingo zokusebenza ukuqinisekisa ukuzinza kokugaya ikhwalithi. Isimo samanje sokuncika kwemishini yokunemba okuphezulu ekungenisweni kwempahla akulindelekile ukuthi sishintshe esikhathini esifushane.
Le nkampani inemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme, izindlela zokuhlola zesayensi kanye nabasebenzi abasezingeni eliphakeme. Main imikhiqizo: ephezulu ngokunemba nginyathela die izingxenye; izingxenye auto; izingxenye zemishini nezingxenye ezizenzakalelayo zomshini. Imishini emikhulu: i-lathe yokulawula izinombolo, i-lathe enkulu yokulawula izinombolo, i-CNC machining centre, ukugaya kwangaphakathi nokwangaphandle kwe-cylindrical, ukugaya i-crankshaft, ukugaya okungenasisekelo, i-honing, ukugaya isibuko ... njll. Ingabe umlingani wakho omethembayo!
Inkampani yethu ingumkhiqizi osebenza ngokukhiqiza, ukuthengisa nokuklama kwezesekeli ezinemba. Imikhiqizo isebenza kakhulu ekukhiqizeni isikhunta, ukukhiqizwa kwezimoto, ukukhiqizwa kwemishini, ezishintshayo nezinye izimboni, futhi sizibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende ngobuchwepheshe obuchwepheshe, ikhwalithi ephezulu kanye nensizakalo eqotho. Imikhiqizo yenkampani inegama elihle, futhi inethiwekhi yokuthengisa isheshe yahlanganisa izwe kanye nomhlaba. Inendawo emakethe yezingxenye zesikhunta nezingxenyekazi zekhompiyutha, futhi ithole udumo kumakhasimende.